Ukuthelekisa okuqhelekileyo, uBelly kunye nePutters Long
Ezinye iziseko ngePetter Ubude: eziqhelekileyo, eziBelly and Long
Kukho amakhulu emininzi yokubeka iifayile ngaphandle, kodwa kukho iintlobo ezintathu ezisisiseko xa kuziwa ubude be-putter: i-putters eziqhelekileyo, i- putters yasebilini kunye ne- putters ende .
Yiyiphi i-putter ubude engcono kuwe? Impendulo elula kukuba yinto ekhethekileyo yokukhetha. Ukuba ucinga ukuhamba kwi-putter yesiqhelo ukuya kwisisu okanye i-putter ende, kufuneka ufune ukubeka uhlaza kwaye ubone ubude obunjani obuvelayo kwaye buvelise iziphumo ezilungileyo.
Uhlobo ngalunye lunempawu, nangona kunjalo, olunokuthi lunciphise ukhetho. Kwaye siza kujonga abo ngoku:
Ininzi yemfundiso iyavuma: Ukuba ungasebenzisa i-putter eqhelekileyo, kufuneka usebenzise i-putter eqhelekileyo. Kwaye mfutshane kweso.
Ukuze ufezekise ukulungeleka ukubeka i-posture, thabatha umgangatho wakho uze ulinde phambili ukuze amehlo akho ngqo ngqo kumgca we-putt. Vumela iingalo zakho zixhomeke phantsi, uze ubeke izandla zakho ndawonye. Voila - ukulungeleka kwakho ukubeka isikhundla.
Ngokucacileyo, awukwazi ukuthatha loo nto ngaphandle kokuba ubude bakho be-putter buyingqungquthela (i-putters ngokuqhelekileyo ivela kwi-32 ukuya kuma-36 intshi).
Ngoko kutheni ezinye iinkqubo (kunye nabadlali abaninzi) baya kwisisu okanye kwi-putters ende? I-putters eqhelekileyo ifuna izisitye zensimbi kunye ncinane ubuncinane besenzo senkosi. Ukungahambi kakuhle kwamathambo kaninzi kuthiwa yi " yips "; abo banesenzo esithe xaxa seentsimbi kuthiwa "banamandla."
Ukuba uhlupheka kwi-yips okanye unamandla kakhulu ekubeka kwakho, ukuzama isisu okanye i-putter ende ibe ngawe.
UMichael Lamanna, umlawuli wemfundo kwi-resort yaseFenike e-Phoenix, e-Ariz., Uthi ngomgca oqhelekileyo, "Ukuvumela ukudibanisa okufanelekileyo kunye nokuchaneka ngokuchanekileyo. "U
I-point yokuthengisa ye-belly putter esetyenziselwa ukuba yanikeza indawo yesithathu yokuqhagamshelana - isisu (kunye nesandla ngasinye) - phakathi kwe-putter kunye nomdlali, owanikezela ukuzinza kunye nokulinganisela kwi-stroke.
Nangona kunjalo, ekubeni ukuvinjelwa kwe-anchoring kwaqala ukusebenza ngo-2016, ukubethelwa ngesisu esiswini kwisisu asivumelekanga phantsi kwemigaqo.
Oko akuthethi ukuba i-golfer ayikwazi ukusebenzisa i-putter yase-belly, nangona kunjalo, kunye nezinye iigolfu zingathanda ubude obude (ngokuqhelekileyo ukusuka kwi-41 ukuya kuma-intshi ama-44) kwaye ngokugqithiseleyo kunokubangela ukuthulisa izandla. Kwakhona, ngelixa u-anchoring engavunyelwe, ukubethelela i-putter ngokubamba ingalo yesilungile, kwaye i-putters yesisu isebenza kakuhle kule "ndlela yokuvala ingalo" yokubeka indlela.
Oluthe xaxa malunga ne-belly putters
I-putter ende ijika ukubeka i-stroke kwi-swing pingulum yangempela, ukuphelisa ngokupheleleyo i-hinge. Abadlali beGolfers bathatha isigxina, ngoko ke abo bafumana ubuthathaka okanye bebuhlungu bafumana ikhefu.
Kodwa i-putter ende-ngokuqhelekileyo ibe ngama-intshi ama-48 ukuya kuma-52 ubude - ide ngaphezu kwe- belly putter ( ayibizwa ngokuba "i-putter ende" - okanye "i- putter ende" -ngento !), Kwaye oko kuthetha ukuba ingxelo. Kwakhona kuthetha ukuba ukulawula umgama kuya kuba yingxaki ngakumbi.
Kodwa akanalo inzuzo yokuthatha isenzo senkosi ngaphandle komdlalo. Njengoko uLamanna uthi, "Oku kudla ngokuba nethemba lokugqibela le-putter embi. Ukuba le nto ayiphilisi i-yips, kufuneka uthathe i-tennis!"
Njengoko isisu se-belly, phawula ukuba ukubethelwa kwe-putters ende (okanye nayiphi na iqela legalufa) "akusemthethweni" phantsi kweMigaqo yeGalofu. Ukuzibeka ixesha elide, nangona kunjalo, kusele kakuhle ukusetyenziswa xa uthanda ukulungelelana kwaye enye inceda ukubeka kwakho.
Okunye malunga ne-putters ende
Izixhobo zeGalufa: KwiMakethe nakwazi
I-Admissions yaseNew Saint Andrews
Ngaphambi kokuba uthenge iNtro yakho yokuqala
Iimpawu kunye nezibalo malunga ne-pre -istoric Xilousuchus
I-Adise State Admissions